चार पाङ्ग्रेको समाधान अटो भिल्ला – News Portal
June 8, 2019 epradeshLeaveaComment on चार पाङ्ग्रेको समाधान अटो भिल्ला
के तपाईलाई सवारी साधन बिग्रेर बाहिर जिल्ला लग्नु पर्दा निकै सास्ती भोग्नु परेको छ ? वा सवारी साधनको लागि आवश्यक पर्ने पाट्सहरु नपाएर समस्यामा पर्नुभएको छ ?
कि तपाई सवारी साधन मर्मत गर्नको लागि कहिले जिल्ला बाहिर त कहिले भारत नै लैजानु पर्दा हैरानी खेपी रहनुभएको त छैन् ? यदि त्यसो हो भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ झिगौरास्थित स्वर्गद्वारी अटो भिल्ला विकास ग्रुप प्रालिले सञ्चालन गरेको अटो भिल्लामा अब यस्तो समस्या भोग्नु पर्दैन । डेढ वर्षदेखि सेवा दिदै आएको प्रालिले सबै सुविधा एउटा ठाउँमा दिदै आएको छ ।
दाङ सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको छ । नयाँ–नयाँ मोडलका सवारी साधनहरु भित्रिदो क्रममा छन् । तर सवारी साधन बिग्रियो भने मर्मतको लागि भने जस्तो भिल्ला नहुँदा सवारी चालकहरुले सास्ती भोग्दै आईरहेका छन् ।
बाहिरबाट मिस्त्री बोलाउनुपर्ने वा जिल्ला बाहिर मर्मतको लागि लैजाँदा धेरै पैसा खर्च हुने र समय पनि धेरै लाग्ने गरेको छ । सवारी चालको यी समस्यालाई ध्यानमा राख्दै यि समस्याबाट छुट्कारा दिनको लागि प्रालिले सुविधा सम्पन्न अटो भिल्ला सञ्चालन गरेको छ ।
अटो भिल्लामा दैनिक दर्जनौ सवारी साधानहरु मर्मत अवस्थामा हुन्छन् । त्यहाँ सवारी साधन मर्मतको लागि नयाँ–नयाँ उपकरणहरु प्रयोग गरिएका छन् ।
सबैभन्दा राम्रो पक्ष त चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई लिफट्को सहायताबाट मर्मत गरिन्छ । बिग्रिएको जुनसुकै सवारी साधन लिफ्ट मार्फत मर्मत गरिदा प्रभावकारी हुने प्रालिले जनाएको छ ।
अब सवारी साधन बिग्रियो भने जिल्ला बाहिरबाट महंगो मेकानिक्स लिएर मर्मत गराउनुपर्ने बाध्यता हराएको छ । जिल्ला बाहिर वा भारतबाट मेकानिक्स बोलाएर मर्मत गराउँदा निकै खर्च हुने,
धेरै समय लाग्ने हुँदा अब प्रालिबाट नै सबै सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । चार पाङ्ग्रे सबै गाडीको मर्मत एकै ठाउँमा हुने स्वर्गद्वारी अटो भिल्ला विजनेस ग्रुप प्रालिका म्यानेजर डाइरेक्टर सुशील पोख्रेलले बताए । फराकिलो स्थान रहेकाले बिग्रिएको सवारी साधन मर्मतको लागि राख्न पनि सहज हुने उनले बताए ।
‘चार पाङ्ग्रेका सबै सवारी साधनहरु मर्मत हुन्छन्’ प्रालिका म्यानेजर डाइरेक्टर पोख्रेलले भने ‘सबैखाले पाट्सहरु पनि यही नै पाईन्छन् ।’ सवारी साधनलाई आवश्यक पर्ने क्वालिटी तथा ओर्जिनल पाट्सहरुको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
‘दाङमा के कति सवारी साधन मर्मतको लागि भिल्लाहरु सञ्चालन गरिएका छन्’ उनले भने ‘तर धेरैजसोमा सबै सेवा एकै ठाउँमा छैन् ।’ कुनै ठाउँमा मर्मत बनाउनको लागि कहिले कुनै पाट्सहरु हुँदैन् कहिले कुनै पाट्सहरु भेटिदैन’ उनले भने । अब चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको कुनै पनि समस्याको समाधान हुने उनले बताए ।
साथै दक्ष मिस्त्रीद्वारा गाडीको मर्मत गरिने उनले बताए । उनका अनुसार महिनामा एक सयभन्दा वढि सवारी साधनको मर्मत हुने गरेको उनले बताए । अटो भिल्लामा आधुनिक उपकरणहरु प्रयोग गरेर मर्मत गरिने पोख्रेलले बताए ।
भिल्लामा डेन्टिङ, पेन्टिङ, डेकोरेशन, पाट्सहरुको व्यवस्था रहेको उनले बताए । सबै कम्पनीको पाट्सहरु पाइने हुँदा जिल्ला बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता नभएको उनले बताए । भिल्लामा सवारी सधानहरु अटो लिफ्टबाट मर्मत गरिन्छ भने अटो एयरमार्फत गाडी सफा गरिने उनले बताए ।
‘सबै ग्राहकहरुले हामीलाई विश्वास गर्दै आउनुभएको छ’ उनले भने ‘एक पटक मर्मत गरिसकेको सवारी साधन फेरी त्यही समस्या लिएर आउनुपर्दैन् ?’ १० कठ्ठा जग्गामा अटो भिल्लाले सेवा दिईरहेको छ ।
‘हामीसँग दक्ष मिस्त्रीहरुद्वारा गाडी मर्मत भईरहेको छ’ उनले भने ‘यदि कोहि गाडी मर्मतको काम सिकेर दक्ष बन्न चाहनु हुन्छ भने तालिमको सुविधा छ ।’
गाडी बनाउने मिस्त्रीको अझै पनि अभाव रहेकाले दक्ष मिस्त्रीको लागि तालिमको पनि सुविधा रहेको उनले बताए । अहिले भिल्लामा तीनजना भारतीय मिस्त्रीसहित १४ जनाले कर्मचारी रहेका छन् ।
आध्यात्मिक मार्गबाट सार्थक जीवन
February 21, 2019 epradesh
कानून गत हप्ताको बाँकी अंश …
April 7, 2019 epradesh